एक्सक्लुसिभ : नेपालमै साँढे तीन लाख भारुमा भाडाका आमा उपलब्ध ! - Himalayan Kangaroo
एक्सक्लुसिभ : नेपालमै साँढे तीन लाख भारुमा भाडाका आमा उपलब्ध !
Posted by Himalayan Kangaroo | १८ श्रावण २०७२, सोमबार १६:०८ |
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा भनाई छ, पैसा भए आमाबाहेक अरु सबै थोक पाइन्छ । तर यदि तपाइँसँग पैसा छ भने अब आमा पनि किन्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि नेपालमै । भाडाका आमा अर्थात् सरोगेट मदरका लागि पछिल्लो समय नेपाल एउटा गन्तब्य बन्न थालेको छ । सरोगेसीसम्बन्धि कानुन नबनेपनि नेपालका ठूला भनिएका अस्पतालहरुले गैरकानुनीरुपले नेपालमा सरोगेसी सेवा दिइरहेको तथ्य खुलेको छ ।
न्यूज २४ टेलिभिजनले सोमवारको मेन न्यूज मार्फत काठमाडौंको धापासीक्षेत्र त्यस्ता भाडाका आमाहरुको बसोबास रहँदै आएको खास खुलासा गरेको हो । रिपोर्टका अनुसार ती महिलाहरु बंगलादेश र भारतबाट नेपाल आएका हुन् भने केहीचाहीँ नेपालीभाषी पनि छन् । तीमहिलाहरु नेपालमा बच्चा जन्माउनका लागि आएका हुन् । तर नेपालमा सस्तो वा सुरक्षित भएर यी महिलाहरु नेपाल आएका भने होइनन्, बरु अरु कसैको बच्च आफ्नो गर्भमा हुर्काईदिनका लागि हो । अर्थात् सरोगेट मदरकारुपमा यी महिलाहरु नेपाल आएका छन् र अरु कसैको गर्भ बोकिदिएर अरुकै लागि बच्चा जन्माइँदैछन् ।
न्युज २४ टेलिभिजनले करिब ३ दिन लगाएर काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका भाडाका आमाहरुका बारेमा गोप्य जानकारी, बसोबासको स्थान, चेकअप लगायतका विषयमा स्टीङ अपरेशन गरेको छ । जहाँ पैसाका लागि अरुकै लागि बच्चा जन्माइदिँदै छन् महिलाहरु ।
पहिले थाईल्याण्ड र भारतमा व्यवसायिकरुपमा सरोगेसी सेवा दिने गरिएपनि अहिले यी दुबै देशमा सरोगेसी प्रतिबन्धित छन् । थाइल्ल्याण्डमा सन् २०१४ को मार्चपछि व्यवसायिक सरोगेसी प्रतिबन्धित छ भने भारतमा पनि सन् २०१५ को फेब्रुअरीपछि व्यवसायिक सरोगेसीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यी दुई देशमा सरोगेसीमा प्रतिबन्ध लागेपछि अहिले दलालहरुले नेपाललाई गन्तब्य बनाएका छन् । मुख्यतः इजरायल, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, स्वीटजरल्याण्ड लगायत देशका समलिंगी पुरुषहरुका लागि बच्चा उपलब्ध गराउन नेपालमा सरोगेसीको ब्यापार मौलाएको छ । बंगलादेश, भारत तथा नेपालीभाषी महिलाहरुलाई नेपाली तथा भारतीय दलालहरुले भारतीय रुपैयाँ ३ लाख ५० हजार दिएर भाडामा आमा बनाउन नेपाल ल्याईरहेका छन् ।
सरोगेसीका लागि भारतीय तथा नेपाली एजेण्टहरुले ४० लाखदेखि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएर सरोगेसी सेवा दिइरहेका छन् । नेपालका ठूला अस्पतालहरुले यस्तो सेवा दिइरहे पनि नेपालमा भने यो गैरकानुनी हो । सरकारले कानुन बनाएरु सेवा सुचारु गर्न दिने तयारी गरेपनि नेपालमा ३ वर्ष पहिलेदेखि नै यो धन्दा चलिरहेका पाइएको छ । तर पनि सरकारी संयन्त्र भने थाहा नपाएको झैँ बसिरहेको छ ।
Previousएकीकृत माओवादीद्धारा संसद वैठक वहिष्कार
Nextउर्जामन्त्री नै कीर्ते धन्दामा !
पोर्न अभिनेत्रीको अनुभव : पोर्न फिल्मले महिलालाई दुखाइरहन्छ मात्र !
२० चैत्र २०७२, शनिबार ०८:३३
रोमान्टिक यात्राका लागि नेपालका ९ गन्तव्य
२६ माघ २०७४, शुक्रबार ०३:०१
कर्णालीमा तिहार: भाइटीकाजस्तै आमाले छोरालाई टिका लगाउँदै
६ पुष २०७४, बिहीबार ०१:५१